Fantaro ny fomba famoronana haingo amin'ny fomba Paris | Bezzia
Haingo amin'ny fomba Paris
Susana Garcia | | Decor, Fironana haingo
El Ny fomba any Paris dia avy amin'ny tanànan'ny Paris, izay resahina hatrany amin'ny glamor sy lamaody. Tsy misy isalasalana fa toerana tsara hijerena aingam-panahy sy hevitra rehefa handravaka ny tranontsika, mba hanana endrika tsara kokoa, araka ny didin'ny rivotra iainan'ny Paris. Ho hitantsika ny hevitra vitsivitsy handravahana ny trano amin'ny fomban'ny Paris, fomba iray izay azo faritana ho fahamendrehana milamina miaraka amin'ny fikitika ny andro.
El Ny fomban'ny Paris dia endrika iray nentanin'ny renivohitra frantsay, toerana izay mbola ahitanao atmosfera bohemia sy chic. Izany no mahatonga an'ity fomba ity, na amin'ny haingo na amin'ny lamaody, dia mirona tsy miraharaha fironana firy ary mitady fikitihana maharitra sy kanto ary tsara tarehy kokoa.
1 Ny fangaro bohemia indrindra
2 Mitondra hazavana be dia be
3 Mitadiava tapa-boaloboka
4 Haingo miharo volo sy malina
5 Aza mitady fahalavorariana
Ny fangaro bohemia indrindra
Ny fampifangaroana dia iray amin'ireo lakilen'ny fomba any Paris. Araka ny efa nolazainay, tsy mirona hanaraka fironana izy ireo raha tsy misy fomba bebe kokoa, na voafaritra tsara, fa mitady ny azy izy ireo ny fombany mitady zavatra sy antsipirihany izay ahitan'izy ireo fa miavaka ary tiany izy ireo. Hevitra tsara hamoronana an'io fangaro io dia ny fividianana antsipirihany maoderina ary ampio ny hafa izay hitanao amin'ny tsena sy tsena parasy, zavatra iray fahita indrindra amin'ny atin'ny Paris. Afaka mahita sary hosodoko taloha eo akaikin'ny vazy misy famolavolana minimalista isika. Ny hevitra dia ny hoe tsy maintsy afangaro ianao fa tsy mandeha any an-dranomasina, mitady sombintsombiny tsy manam-paharoa, izay tiantsika ary miavaka. Tokony hatao tsy amin-tahotra izany, satria fantatry ny Parisianina fa ireo izay manana endrika tsy matahotra ny afangaro mba hahatratra endrika manokana anatiny miaraka amin'ny toetra.
Mitondra hazavana be dia be
La tena ilaina matetika ny hazavana amin'ny atiny Paris. Ny fisaka antitra matetika dia manana varavarankely lehibe sy valindrihana avo, mamela hazavana maro ho entina ao an-trano. Na izany aza, raha maniry hazavana bebe kokoa hiditra isika dia afaka mampiasa fitaratra, satria taratra izany ary manitatra toerana, ary ny loko fotsy amin'ny rindrina sy eo amin'ny baoritra. Raha hoso-doko fotsy ny tabilao fanaovana skirting dia hihalalaka kokoa ny rindrina.
Raha maniry fomba Parisianina tena izy ianao dia tsy tokony hiala amin'ny fiotazam-boaloboka. Fahita any Paris ny mahita tsena faran'ny herinandro izay ahitanao sangan'asa miavaka izay manana tantara ary afaka manana fiainana faharoa izy ireo. Fitaratra fahagola, vazy kely, hosodoko manokana ary maro hafa. Ireto antsipiriany kely ireto dia ireo izay manome ny toetrany toetrany bebe kokoa amin'ny farany, ka raha tianao ny mikasika an'i Paris, dia tsy afaka miala amin'ny fanampiana sentetika ianao. Azonao atao koa ny mampiditra fanaka taloha amin'ny endriny voalohany.
Haingo miharo volo sy malina
El Ny fomba frantsay dia nifamatotra tamin'ny rendrarendra, amin'ny antsipiriany volamena ary miaraka amin'ny firavaka maro. Na izany aza, hitantsika ihany koa ny fomba itadiavan'ny fomba any Paris ny fikitika voajanahary kokoa. Izany no antony ampidirina amin'ireo haingon-trano ireo ny fikasihan-tanana tsara tarehy sy mihaja nefa matetika amin'ny fomba malina. Ny chandelier kristaly ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ny fitaratra misy accents volamena, na ny kojakoja volamena hafa dia afaka manampy an'io.
Aza mitady fahalavorariana
Ao amin'ny atitany Paris dia tsy mitady toerana magazine ianao. Tadiavo voajanahary sy tsy fahalavorariana. Izany hoe, aza apetraka amin'ny boky symmetrika ireo boky namboarina tamin'ny loko, ny fanaka na mifanaraka tsara amin'ny karipetra. Fantatray fa ny fomba any Paris dia manana zavatra mampiavaka ny bohemia ary noho izany dia tsy mitandrina izy ireo, noho izany dia tsy maintsy mamorona tsy fahalavorariana ianao eny amin'ny habakabaka. Miampita ny rava, manaova a fitambarana sary tsy simetrika ary manangona ireo boky amin'ny zoro iray. Ity fikitika ity dia hahatonga ny rivotra iainana any Paris sy tsy hanana ahiahy. Miaraka amin'ireo fikitika mahafinaritra ireo dia hanana ny haingon-trano Paris izay tena mahomby ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Haingo amin'ny fomba Paris
Ahoana ny fomba isehoan'ny fanararaotana ara-toekarena ao anatin'ny mpivady
Fotsy amin'ny fotsy, ny fitambaran'ny fahavaratra